တိုင်းရင်းသား ၂ ဖွဲ့ကို မတရားအသင်းအဖြစ် ဖျက်သိမ်းမှု ယာယီဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောသာဟုဆို | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း တိုင်းရင်းသား ၂ ဖွဲ့ကို မတရားအသင်းအဖြစ် ဖျက်သိမ်းမှု ယာယီဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောသာဟုဆို
epa03880295 Speaker of the lower house of the Myanmar parliament, Thura U Shwe Mann looks on as he meeting with Thai Prime Minister at Government house in Bangkok, Thailand, 23 September 2013. Myanmar parliament's speaker Thura U Shwe Mann is on an official visit to Thailand. EPA/NARONG SANGNAK
တိုင်းရင်းသား ၂ ဖွဲ့ကို မတရားအသင်းအဖြစ် ဖျက်သိမ်းမှု ယာယီဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောသာဟုဆို
NCA လက်မှတ်ထိုးမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ကို မတရားအသင်းအဖြစ် ဖျက်သိမ်းမှု ယာယီဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောသာဖြစ်တယ်လို့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက တဆင့် သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလို ပြောကြားရာမှာတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ရှု့ပြီး ဒေသခံတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ သောကကို လျော့နည်းစေသလို ပြည်သူအပေါ် ညှာတာမှု၊ စာနာမှုရှိတာကို ပြသရာရောက်တယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါအပြင် မတရားအသင်းအဖြစ်ကိုလည်း ယာယီဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောဖြစ်လို့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အကျိုးဆောင်ပေးသူတွေအတွက်ကိုပါ ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရစေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ အလားတူ NCA စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထပ်ထိုးမဲ့ ညီနောင်အဖွဲ့တွေကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
တိုငျးရငျးသား ၂ ဖှဲ့ကို မတရားအသငျးအဖွဈ ဖကျြသိမျးမှု ယာယီဆိုငျးငံ့တဲ့ သဘောသာဟုဆို
NCA လကျမှတျထိုးမယျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ ၂ ဖှဲ့ကို မတရားအသငျးအဖွဈ ဖကျြသိမျးမှု ယာယီဆိုငျးငံ့တဲ့ သဘောသာဖွဈတယျလို့ လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး သူရဦးရှမေနျးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၀ ရကျနကေ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာက တဆငျ့ သူရဦးရှမေနျးက ပွောကွားလိုကျတာပါ။
ဒီလို ပွောကွားရာမှာတော့ အပဈအခတျရပျစဲရေးဟာ ငွိမျးခမျြးရေးကို ရှရှေု့ပွီး ဒသေခံတှနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ ဒုက်ခနဲ့ သောကကို လြော့နညျးစသေလို ပွညျသူအပျေါ ညှာတာမှု၊ စာနာမှုရှိတာကို ပွသရာရောကျတယျလို့လညျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
ဒါအပွငျ မတရားအသငျးအဖွဈကိုလညျး ယာယီဆိုငျးငံ့တဲ့ သဘောဖွဈလို့ အဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ အကြိုးဆောငျပေးသူတှအေတှကျကိုပါ ကောငျးသောအကြိုးသကျရောကျမှုကို ရစတေယျလို့ဆိုတာပါ။
အလားတူ NCA စာခြုပျကို လကျမှတျထပျထိုးမဲ့ ညီနောငျအဖှဲ့တှကေို ကွိုဆိုဂုဏျပွုတယျလို့လညျး ပွောကွားထားပါတယျ။
Previous articleပြည်ထောင်စုနေ့ တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အသံ (ရုပ်/သံ)
Next articleNCA လက်မှတ်ထိုးမယ့် တိုင်းရင်းသားနှစ်ဖွဲ့ကို Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ တွေ့ဆုံ